Covid-19: Ka anyị chee maka ya ntakịrị “China na-ekwu na ya emeriela nje Corona kpamkpam; otu o sila dị, ọ bụ ebe izizi nke oria ojoo n’ụwa ”… (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: March 29, 2020 00: 30 Enweghị asịsa
Obodo China nke Wuhan, ebe achọpụtara nje Corona, gọọmentị China nyere ikike ngagharị nke ndị mmadụ na ngwongwo ha ebe ahụ, dịka ọ dị na China ndị ọzọ. Ndụ alọghachila nkịtị n’oge China niile. Na mgbakwunye, ka ọrịa na-efe efe na mba ndị ọzọ ruo n'ókè nke ịma jijiji ụwa dum, China emechiwo ọnụ ya. Ọ bụ nri iche echiche.
Kedu ihe kpatara o jiri bụrụ na West ga-akwụ oke ụgwọ maka ọnụahịa Covid-19, amụrụ na China? Kedu ihe kpatara ọgụ a na-alụso nje Corona bụ nke a na-esi merie na ụwa ndị ọzọ ??
Na United States, ọnụọgụ ndị mmadụ metụtara gafere akara 100.000. Na Europe, otu mba Spen edebanyela aha ọnwụ karịrị puku anọ. Ọnọdụ ahụ dịkwa oke egwu na Italy, France na obodo ndị ọzọ. UN na-atụ egwu nke ahụ Covidien-19 ga-emebi Africa naanị ma ọ bụrụ na ewereghị ihe ọ bụla megide nje Corona.
Onye isi ala America, na-ekwu maka Covidien-19, ekwuru ya mgbe ọ sịrị na ọ bụ nje China. Ọ bụ ezie na China agbakeela ngwa ngwa, ụwa ndị ọzọ ka dị na apịtị n'ihi nje Corona. Akụ na ụba ụwa ga-ada site ebe a post Covidien-19 ; ewezuga China enwere ike nke a agaghị emetụta ọtụtụ ndị ụwa. Enwere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na ọdachi Corona "" mere na China ”.
Ọkt20 01: 19